Ingiriiska: "oo Qabtey Dawo been abuur oo la sheegey in lagu daweynayo Corona" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ingiriiska: “oo Qabtey Dawo been abuur oo la sheegey in lagu daweynayo...
Ingiriiska: “oo Qabtey Dawo been abuur oo la sheegey in lagu daweynayo Corona”
Booliska Ingiriiska ayaa Sabtidii sheegay inay ku eedeeyeen nin soo saaray daawo been abuur ah oo lagu daaweynayo fayraska Corona isla markaana isku dayaya inuu ka iibiyo dalka dibadiisa.
Booliska ayaa xiray Frank Ludlow, oo 59 jir ah, kana soo jeeda Galbeedka Sussex, oo ku taal koonfurta England Jimcihii, iyagoo ku eedeeyey musuqmaasuq iyo haysashada agab loo adeegsado khiyaanadan iyo sharci-darrada soo saarista dawooyinka.
Ludlow ayaa ka soo muuqday maxkamad Brighton oo ku amartay in xarigiisa uu sii socdo ilaa Abriil 20.
Xariga Ludlow wuxuu daba socday baaritaan wada jir ah oo ay sameeyeen Qeybta Dambiyeedka Maskaxda ee Booliska Magaalada London, Hay’ada Xakameynta Daawooyinka Caafimaadka iyo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka.
Kiisku wuxuu billowday markii saraakiisha Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudaha ee Los Angeles ay fara-geliyeen qeybtii Maarso 18 ee laga soo diray Boqortooyada Ingiriiska oo ay ka koobnaayeen 60 xirmooyin oo gooni ah si loogu daweeyo Coronavirus, oo loo aqoonsaday “daaweynta ka hortagga cudurka”.
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey in badeecadan ay tahay dawo aan la oggoleyn, waxayna ogeysiisay Hay’adda Sharciga Daawooyinka ee UK iyo Hay’adaha Xannaanada Caafimaadka.
Kenya oo xirtay xudduud ay la wadaagto Soomaaliya ee Lamu iyo...